Hawadii kuleeylaha ee ugu liidatay Sweden muddo 155 sannadood ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dooni ku xiran meel xeeb ah. sawir: Henrik Holmberg/TT
Hawadii kuleeylaha ee ugu liidatay Sweden muddo 155 sannadood ah
La daabacay onsdag 30 augusti 2017 kl 08.30
xilligii ugu dambeeyay oo uu dalka Sweden la soo gudboonaado kuleeyle sidan u liita wuxuu ahaa sannadkii 1862 sida ku xusan jadwalka taariikhda (almanackan).
Cimiladii ugu kululayd intii u dhexeeysay bilihii juun iyo agoosto ayaa gaadhay 28,0 digrii magaalada Oskarshamn taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii juun iyo magaalada Kalmar 19-kii bishii juun, sida ay sheegtay hayadda saadaalinta hawada ee magaceeda loo doo gaabiyo SMHI.
Cimilo kuleeyle ee sidan u debec-san ayaa la cabirey sannadkii 1922, hase yeeshee mid ka hooseysa si loo helo waa in dib loo noqdo 155 sannadood. Xilligii kuleeylaha ee sannadkii 1862 ayuu kuleeyluhu ahaa mid u dhigma ugu badnaan 28,0 digrii.
Nawaaxiga badda dhexe ayuu xilligii kuleeylihii la soo gudboonaaday cimilo aad u kulul oo joogto ah. Iyada oo hawadii kululayd ay ku baahday carriga waqooyiga buuraha Albis (Alperna). Balse aanay soo gaarin Sweden. Waa maxay sababtu?
"Waxaa la oran karaa inuu calafku sidaa noqday. Waxaannu sidaa niraahnaa kolka aaney saadaaliyeyaasha hawadu jawaab ka wanaag-san aanay u heyn su’aasha", sida faallo lagu qoray bogga hayadda saadaalinta hawada ee SMHI:
"Xaalad walba oo lagu jiro waxay ahayd inay hawada Sweden ee kuleeyluhu ka sarreeyso sida ay sannadka ahayd!"
Faallo: Hawadii ugu kululayd ee sannadka ayuu heer-kulku gaaray 30,1 digrii magaalada Oskarshamn 28-kii maajo (bisha maajo ayaan lagu xisaabin bilaha kuleeylaha).